Tag: consumer purchase decision » Martech Zone
Tag: consumer purchase decision
Impembelelo yeBrand kwiSigqibo sokuThengwa kwabaThengi
NgeCawa, ngoSeptemba 27, 2015 NgoLwesine, Novemba 5, 2015 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Besihleli sibhala kwaye sithetha kakhulu malunga nokunikezelwa kunye nesigqibo sokuthenga njengoko sinxulumene nemveliso yokuqulathiweyo. Ukwamkelwa kweBrand kudlala indima ebalulekileyo; mhlawumbi ngaphezulu kunokuba ucinga! Njengoko uqhubeka nokwakha ulwazi malunga negama lakho kwiwebhu, gcinani engqondweni ukuba-ngelixa umxholo ungakhokeleli kwangoko kuguquko- kunokukhokelela ekuqondeni uphawu. Njengokuba ubukho bakho busanda kwaye uphawu lwakho lusisixhobo esithembekileyo,